खोइ गरिबको लागि लोकतन्त्र ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र १४ गते ०५:५६
निरज कालिका । नेपाल लोकतन्त्रात्मक मुलुक हो । के नेपाली जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाएका छन् त ? अहिलेको परिवेशमा हेर्दा महंगी अनि राजनीतिक क्रियाकलापले आम नेपाली जनताले खासै लोकतन्त्रको आभास गरेका छैनन । राजनीतिक खिच्चातानीको कारण एक पक्ष चुनावमा जाउ भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष सरकारमा । गरीबले खाई नखाई तिरेको करको पैसा चुनाव गर्न वा राजनीतिक खिच्चातानी गर्न हो त ? पक्कै पनि होइन । अर्को कुरा हरेक ठाउँ राजनीतिकरण छ । हरेक कार्यालय, विद्यालय, गाउँ नगर आदि ठाउँठाँउमा राजनीति कारण छ । राजनीति पहुँच भएका व्यक्तिले काम, नाम, दाम र माम सबै पाउँछन् तर पैसा, पावर र पहुँच नभएकाले भोकै सुत्नुपर्ने हुन्छ, भोकै मर्नुपर्ने हुन्छ । सिधै भन्नुपर्दा जताततै राजनीति चलखेल छ । हाम्रो देशका युवा शक्ति जति लावालस्कर लागेर विदेश गएका छन् । हुने युरोप, नहुने कतार दुवै मलेसिया वा अरब मुलुक गएका छन् । अनि हामी नेपालमा बस्ने भारतीय नौजवानलाई काम लगाउँछौ । उनीहरूको मुख ताकेर महंगो रकम तिरेर काम लगाउँछौ । त्यस्तै सुदुर गाउँतिर त भोकमरी कुपोषण आदि वर्षाैँ देखिको समस्या हो ।
के जनताले लोकतन्त्र यसका लागि लडेर ल्याएका हुन ? यहाँ नाङलो पसलमा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अनि गरीबले फुटपाथमा केही बेच्न राख्यो भने त्यो पनि नगरप्रहरीले लैजान्छ । खोइ गरिबको लागि लोकतन्त्र ? कहाँ छ गरीबलाई सुविधा ? कोटा छुट्याइएको पनि हुने खानेले गरीब बनेर खान्छन् । त्यहाँ पनि राजनीतिकरण हुन्छ । यो लोकतन्त्र महंगो भएको कारण एउटै छ । त्यो हो संघियता । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार । तीनतीन तहका सरकार पाल्ने जिम्मा गरीब जनताको काँधमा छ । यसै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गरिबी बढेको हो । हुन त फेरि लोकतन्त्र जतिको राम्रो प्रणाली अरु छैन । तर पनि कुर्सीमा बस्ने नेताको गलत आचरणको कारण यसो भएको हो । कुर्सीका लागि लड्ने र मरिहत्ते गर्नेहरुलाई म उदाहरण दिन्छु ।
गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री खाउ भन्दा हैन म बुडो भएँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई खाउ भने । अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई एउटा छाता, बाकस र एउटा सुराईको भरमा प्रधानमन्त्री भने । प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा पनि त्यही लिएर पसे । पछि त्यही लिएर प्रधानमन्त्री त्यागेर बाहिर निस्के । यस्तो त्याग हुनुपर्छ राजनीतिमा । उनले देश र जनताको लागि विवाहसम्म गरेनन् । उनको पनि उमेर थियो होला, रमाइलो गर्ने मन थियो होला । आखिर सन्त नेता बने । नेपालमा यस्तो त्याग भएका नेता बिपी कोईराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता कमै छन् । यति मात्र होइन उनीहरुले कयौं वर्ष जेल नेल भोगे । हुन त जेल नेल भोगेका नेता नभएका होइनन् तर पछिल्लो कालखण्डमा आफ्नो स्वार्थका लागि पैसामा विकेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नै देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्ने हो भने सम्पन्न बन्न सक्छ । समय लाग्दैन । विभिन्न प्रकारका खानी पत्ता लगाएर ती खनिज पदार्थ निकालेर बिक्रीवितरण गर्न सक्छ । नेपालमा कयौं नदी छन् । ती नदीबाट बिजुली बत्ति उत्पादन गरेर अन्यत्र मुलुक लाई बेच्न सक्ने स्थिति छ । धेरै कुरो नेपाल आमाले आफ्नो गर्भमा लिएकी छन । बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा यस्तो गरिबी कामबिहीन देख्दा मन नरमाइलो लाग्छ । मन खिन्न हुन्छ । तर पनि आउँदा पुस्ता देख्दा भने केही आस जागेर आउँछ ।